Kuhle I-Webforum kusukela ngo-2004
ngaphezulu ...Ama-Cockpits wokuhlolisisa nokuphatha
Ukuzikhulula kanye nokufakwa
Ukubika okuqukethwe okungekho emthethweni ezinkundleni: abuse@schagerer.com
Sicela ucaphune izingcaphuno bese uzithethelela ngendlela engajwayelekile ngokuya nge-ÖStGB §.
1. Isikweletu kokuqukethwe kule webhusayithi
Sihlala sithuthukisa okuqukethwe kule webhusayithi futhi silwela ukuhlinzeka ngolwazi olufanele nolusha. Ngeshwa, ngeke sithathe noma yisiphi isikweletu ngokunemba kwakho konke okuqukethwe kule webhusayithi, ikakhulukazi kulabo abanikezwe abantu besithathu. Okokuqukethwe kwezinhlaka ezithathiwe kanye namakhasi agcinwe kungobo yomlando, umnikazi wethimba elifanele hhayi opharetha unesibopho, lokhu kunikeza kuphela ipulatifomu yezobuchwepheshe etholakalayo futhi inesikweletu ngokuya nge-§16 ECG njengomhlinzeki wokusingatha hhayi wamalungu ayo nemisebenzi yawo. Uma uqaphela noma ikuphi okuqukethwe okuyinkinga noma okungekho emthethweni, sicela uxhumane nathi ngokushesha, uzothola imininingwane yokutholakala kuleyo nto.
2. Isibopho sokuxhumeka kule webhusayithi
Iwebhusayithi yethu iqukethe izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi okuqukethwe esingabhekene nakho. Isikweletu samawebhusayithi axhunyiwe asikho ngathi ngokusho kwe-§ 17 ECG, ngoba besingenalo ulwazi lwezinto ezingekho emthethweni futhi asikuqaphelanga okungekho emthethweni futhi sizosusa izixhumanisi ngokushesha uma siqaphela noma ikuphi okungekho emthethweni. Uma ubona izixhumanisi ezingekho emthethweni kwiwebhusayithi yethu, sicela uxhumane nathi, uzothola imininingwane yokuxhumana ngokufakwa endaweni.
3. Isitoreji sedatha ezenzakalelayo
Lapho uvakashela amawebhusayithi namuhla, imininingwane ethile idalwa ngokuzenzakalelayo futhi igcinwe, kufaka phakathi le webhusayithi. Uma uvakashela iwebhusayithi yethu njengoba injalo manje, iseva yethu yewebhu (ikhompyutha lapho le webhusayithi igcinwa khona) igcina ngokuzenzakalelayo imininingwane efana nekheli (i-URL) lewebhusayithi oyifunayo, isiphequluli sakho kanye nesiphequluli, uhlelo olusetshenzisiwe olusetshenzisiwe, ikheli (i-URL) lalowo ovakashelwe ngaphambilini Ikhasi (Referrer URL), igama lokusingathwa nekheli le-IP ledivayisi lapho litholakala khona, nosuku nesikhathi kumafayili (Amafayela e-Web server). Njengomthetho, amafayela e-web server yewebhu agcinwa amasonto amabili abese esuswa ngokuzenzakalela. Asidaluli lolu lwazi, kodwa ngeke sikhiphe isinqumo sokuthi luzobonakala uma kwenzeka izinto ezingekho emthethweni. Isisekelo sezomthetho, ngokuya nge-Article 6 isigaba 1 f DSGVO (umthetho wokucutshungulwa), ukuthi kunentshisekelo esemthethweni yokuvumela ukusebenza ngaphandle kwamaphutha kwale webhusayithi ngokuthwebula amafayela we-web server.
4. Ukugcinwa kwemininingwane yomuntu siqu
Idatha yomuntu siqu oyithumela nge-elektroniki kithi kule webhusayithi, efana negama, ikheli le-imeyili, ikheli noma olunye ulwazi lomuntu siqu esimweni sokuthumela ifomu noma amazwana, izokwabiwa ngathi kanye nesikhathi nekheli le-IP. isetshenziselwe inhloso echaziwe, igcinwe iphephile futhi ingadalulwa kubantu besithathu. Sisebenzisa imininingwane yakho kuphela ukuxhumana nezivakashi ezicela ngokuqondile ukuxhumana nabantu nokucubungula izinsiza kanye nemikhiqizo enikezwe kule webhusayithi. Ngeke siveze imininingwane yakho ngaphandle kwemvume, kodwa ngeke sikhiphe isinqumo sokuthi kuzobonakala uma kwenzeka izinto ezingekho emthethweni. Uma usithumela imininingwane yomuntu nge-imeyili, kude nale webhusayithi, ngeke sikwazi ukukuqinisekisa ukuhanjiswa okuvikelekile nokuvikela imininingwane yakho. Sincoma ukuthi ungathumeli imininingwane eyimfihlo nge-imeyili. Isisekelo sezomthetho ngaphansi kwe-Article 6 (1a) ye-GDPR (ngokomthetho wokucubungula) ukuthi usinika imvume ekucutshungweni kwedatha oyifakayo. Ungahoxisa le mvume nganoma yisiphi isikhathi, i-imeyili engakahleleki yanele, uzothola imininingwane yethu yokutholakala.
5. Amalungelo ngokuya nge-General Data Protection Regulation
Ngokuya ngezinhlinzeko ze-GDPR kanye ne-Austrian Data Protection Act (DSG), banamalungelo alandelayo kumgomo: ilungelo lokulungiswa (i-Article 16 GDPR), ilungelo lokucishwa (i-Article 17 GDPR), ilungelo lokuvinjelwa kokusebenza (i-Article I-18 DSGVO), ilungelo lesaziso, umsebenzi wesaziso maqondana nokulungiswa noma ukususwa kwemininingwane yomuntu uqobo noma umkhawulo wokucubungula (i-Article 19 GDPR), ilungelo lokuphatheka kwedatha (i-Article 20 GDPR), ilungelo lokuphikisana (i-Article 21 GDPR), ngakwesokudla, hhayi okukodwa ukuze kufakwe esinqumweni esincike ekusebenzeni okuzenzakalelayo, kufaka phakathi i-profiling, (i-Article 22 GDPR). Uma ukholelwa ukuthi ukucubungulwa kwedatha yakho kwephula umthetho wokuvikela idatha noma uma kungenjalo, izicelo zakho zokuvikela idatha zephulwe ngendlela, ungakhalaza kwabaphethe, okuyi-Austria okuyigunya lokuvikela idatha.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa amakhukhi e-HTTP ukugcina idatha ekhethekile yomsebenzisi. Ikhukhi yiphakethe ledatha elifushane elishintshaniswa phakathi kwesiphequluli sewebhu neseva yewebhu, kepha alisho lutho ngokuphelele kubo futhi lisetshenziselwa uhlelo lwewebhu kuphela, njengohlelo lwewebhu. Njengeforamu, nencazelo, ngokwesibonelo, ukugcina okwesikhashana idatha yesikhathi ye-akhawunti yomsebenzisi ongene kuyo esithangamini. Kunezinhlobo ezimbili zamakhukhi: Amakhukhi weqembu lokuqala adalwa yiwebhusayithi yethu, futhi amakhukhi avela eceleni adalwe ngamanye amawebhusayithi (isb. Cloudflare). Umehluko owengeziwe wenziwa phakathi kwezigaba ezintathu zamakhukhi, lo mehluko usekelwe kwisidingo sokusetshenziswa: amakhukhi abalulekile ukuqinisekisa imisebenzi eyisisekelo yewebhusayithi, amakhukhi asebenzayo ukuqinisekisa ukusebenza kwewebhusayithi namakhukhi ahlosiwe ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi. Amakhukhi wethu weqembu lokuqala adingeka kakhulu kwezobuchwepheshe ukusebenza kwezinsizakalo futhi ayiqukethe imininingwane yomuntu siqu efana nekheli lakho le-IP noma ikheli lakho le-imeyili. Amakhukhi ethu asebenza ngaphansi kwe-§ 96 Telecommunication Act (TKG), ngoba insizakalo ngeke isasebenza kubo bonke abasebenzisi lapho amakhukhi ekhubazekile. Imvume ngaphakathi kwencazelo ye-TKG ayidingekile. Ngokuqondile, lawa makhukhi eqembu lokuqala: * _data, * _t, * _sid futhi ngokuzikhethela xt_ddos_key, xt_fboff no-xt_banman njengamakhukhi weseshini yokungena ngemvume nedatha yeseshini, xt_cdn, xt_dir kanye ne-xt_rewrites ukukuqondisa kabusha ukufinyelela ku-Cloudflare , kanye ne-xt_cookiecheck ukukwazisa ngenothi eliseduze kwemaskhi yokungena, uma ukhubaze amakhukhi kusilungiselelo sakho sesiphequluli. Ikhukhi lomuntu wesithathu __cfduid ikhukhi elidingeka ubuchwepheshe kusuka ku-Cloudflare. Sisebenzisa izinsizakalo ze-Cloudflare ukuvikela izinsiza zethu ekuhlaselweni kwe-DDoS, ngaphandle kwalokho ukutholakala kwabo bekungeke kuqinisekiswe. Amakhukhi ahlala agcinwe kudivayisi yakho kuze kuphele isikhathi sawo noma uze uwasuse, okungenzeka ngokuya ngokulungiselelwa kwesiphequluli sakho lapho kuvalwa isiphequluli sakho. Uma ngokuvamile ungasivumeli ukuba sisebenzise amakhukhi, i. khubaza lokhu ngokuhlelwa kwesiphequluli, eminye imisebenzi namakhasi akakwazi ukusebenza njengoba bekulindelekile.
7. Isebenza Imigomo yokusetshenziswa